Puntland oo xukun dil ah ku fulisay Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Daraawiishta – STAR FM SOMALIA
Puntland oo xukun dil ah ku fulisay Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Daraawiishta
Sida uu Saxaafadda u sheegay Xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada Qalabka Sida ee Puntland C/kariin Xasan Firdhiye Maxkamada ciidamada Qalabka sida ee Puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Puntland.
Sarkaalkaan la toogtay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Ceydaruus Daahir Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland, kadib markii uu toogtay Sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidamada.
Ceydaruus ayaa loo qisaasay Sarkaal hore uu dilay, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Ex Labo Xidigle Cabdi Wali Farax Ismaaciil, kaasi oo dilkiisa dhacay 22-kii Bishii Shanaad ee sanadkaan.
Xukunka dilka ah ee lagu fuliyay Ceydaruus Daahir Maxamed, ayaa wuxuu ka dhacay Magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Xeer ilaaliyaha Maxkamada ciidamada Qalabka sida ee Puntland ayaa sheegay xukunkaan inuu waafaqsan yahay sharciga Islaamka, maadaama ay aheyd Qisaastii Marxuumka horay loo dilay.
Magaalada Garowe ayaa si weyn looga hadal hayaa xukunkaan dilka ah ee lagu fuliyay Sarkaalkaan ka tirsanaa ciidamada Puntland.
Madaxweynaha oo saxiixay Sharciga Dhismaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka‏ (Daawo Sawirada)
Wasaarada Arimaha Gudaha oo soo bandhigtay raashin halaabay oo Masar Somaliya u soo dirtay